Firefox inosanganisira sarudzo yemudziyo, uye saka inogona kumisikidzwa | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekugonesa iyo Firefox Midziyo sarudzo, yakaenzana neMulti-Account Midziyo
Kweinopfuura gore ikozvino, uchishandisa iyo Husiku vhezheni ye Firefox, pfungwa , que the mudziyo sarudzo Mozilla yaizosvika kune yakagadzikana vhezheni munguva pfupi. Iyo nguva yakanga ichipfuura, uye sarudzo haina kuzombouya. Kuti utore mukana wemidziyo mune yakagadzikana vhezheni yegava browser, unofanirwa kushandisa Multi-Akaunti Midziyo, zvirinani zviri pamutemo. Kuziva kuti iyo Nightly vhezheni yaitwa kuti ishandiswe, hazviite zvakafanana kuitwe pane yakagadzikana imwe?
Sezvo vazhinji venyu vatoziva kare, Firefox ine peji rekumisikidza iyo inowanikwa nekuisa iyo URL bar pamusoro: config. Izwi nderekuti "activated", zvinova ndizvo zvakaita iyo Nightly vhezheni yacho, saka isu tinongofanirwa kudaro tsvaga sarudzo pane ino peji uye uite zvakafanana. Zvakareruka sekudaro. Kuti tidzivise kuvhiringidzika, tinotsanangura matanho ekutevera.
Bvumira midziyo muFirefox
Mu URL bar, tinonyora pamusoro: config uye tinodzvanya Enter.
Kana yambiro ikaratidza kuti tiri kupinda munzvimbo ine njodzi, tinoigamuchira. Kana isu tisingade kuti zvioneke mune ramangwana, isu tinobvisa bhokisi tisati tabvuma.
Zvino isu tinotsvaga zvakavanzika.usercontext.
Kubva pane sarudzo dzinoonekwa, tinokanya kaviri pairi zvakavanzika.userContext.enabled y zvakavanzika.userContext.ui.enabled. Kudzvanya zvakapetwa shanduko kubva "kwenhema" kuenda ku "chokwadi", asi tinogonawo kubaya pane bhatani riri kurudyi, patinotenderera pamusoro payo panoti "Toggle".
Nezviri pamusoro, kudzvanya uye kubatisisa pane iyo nyowani tebhu bhatani, iyo midziyo sarudzo ichaonekwa. Sarudzo nyowani ichaonekwa zvakare kuvhura zvinongedzo mumudziyo mutsva, sezvazvinoonekwa patinoisa Zvakawanda-Akaundi Midziyo. Asi zvakakosha kuti utaure kuti sarudzo yemuno iri shoma zvakanyanya; Hatigone kuyananisa iwo matabhu kana kuafambisa, kunze kwekunge tagadzirisa zita uye chiratidzo cheizvo zviripo. Sezvakanaka, kana ichikushandira, sezvandakaita, imwe yekuwedzera kuwedzera kuisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekugonesa iyo Firefox Midziyo sarudzo, yakaenzana neMulti-Account Midziyo
Ini ndinokurudzira iyo Yekukanganwa Ini Kwete yekuwedzera iyo inouya neMulti-account Midziyo nekumira asi zvakare inokutendera iwe kudzima makuki kana kuramba chechitatu-bato makuki uchitsvaga uchidzima data rakaomarara senge nhoroondo uye ruzivo rwakasiyiwa nemasayiti uku uchitsvaga, Izvi zvinogona yakarongedzwa zviri nyore chero paunenge uchitsvaga kana pakutanga paunovhura browser kana kana iwe uchisiya dura Kunyangwe sekurudziro isiri yekubata mapassword chikamu kana iwe uine Firefox Lockwise, inovabvisa zvisina tsitsi. Nenzira, chimwe chinhu chandanga ndichinetseka pamusoro peFirefox Lockwise, chii chinonzi gehena kushandisa mapassword kana vasingatenderi kupinza mune chero fomati, ndeyekuti pamwe vane chinangwa chekuvhara sevhisi?.
Nezve chinhu chekupedzisira chaunotaura, icho chinhu chandanga ndisina kuona, asi ichokwadi. Ini handizive kuti nei zvichiitika, ini handizive kana ichi gara yakadai kana muLinux chete, asi basa rakaremara. Inogona kuitiswa nekushandura sarudzo ku "chokwadi" signon.management.page.fileImport.enabled ye pamusoro: config.
IBM yakagadzira COBOL compiler yeLinux yakavakirwa pane x86 dhizaini
FFmpeg 4.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwemavhidhiyo dhodhi, mafirita matsva uye zvimwe